Matongerwo eNyika, 13 Kurume 2018
Chipiri 13 Kurume 2018
Zambuko reKazungula Rozeyiwa neZvaro
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dziri kupesana pfungwa panyaya yekuti Zimbabwe inowana chouviri here pazambuko reKazungula kana kuti kwete. Zambuko iri riri pakati peZambia neBotswana.
Mukuru wekambani ye Intratrek, Va Wicknell Chivhayo, vari kusungiswa nekomiti yezvemigodhi nemagetsi, zvichitevera ongororo yakaitwa nekomiti pahuori hunonzi hwakaitwa pakuvakwa kwegwenya remagetsi e solar ku Gwanda rinoita mamirioni mazana maviri emadhora.
VaTrump Vanodzinga VaTillerson Basa
Mutungamiri weAmerica, VaDonalad Trump, vadzinga basa gurukota ravo rinoona nezvekudyidzana kwe America nedzimwe nyika, VaRex Tillerson.
Amai Mnangagwa Vanotungamira Chikwata cheMadzimai kuMusangano weMadzimai kuNew York
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Manangagwa vari kutungamira chikwata chemadzimai kubva kuZimbabwe kuenda kuNew York, kuAmerica, pamusangano wechimakumi matanhatu nemaviri kana kuti 62nd Commission on the Status of Women.
ZLHR Yoshoropodza Kusungwa kweMadzimai paMugodhi weHwange
Kuratidzira uku kwakatanga musi wa27 Ndira. Kubva gore rapera vashandi vange vachingopihwa chikamu chete chemari yavo yemuhoro zvakapa kuti madzimai avo apindire.
Health Services Board Inoti Yawirirana navanaChiremba vari Kuramwa Mabasa
Asi mutungamiri wesangano ravanachiremba vezvipatara zvehurumende reHospital Doctors Association, Doctor Mloxisi Ngwenya varamba mashoko aya, vachiti hapana chati chatenderanwa uye vanachiremba havasi kuzodzokera pamabasa.